Abantu abaningi bayaqiniseka ukuthi amaphupho akuzona nje izithombe ezinhle. Bakholelwa ukuthi lezi ezinye imiyalezo engakwazi ukubikezela ikusasa. Yingakho kulesi sihloko ngifuna ukukutshela ngalokho utshani obuluhlaza obuphuphayo.
Uma umuntu ephupha utshani obuluhlaza, udinga ukukhumbula ngaphansi kwezimo ezavela kuzo. Ngakho-ke, ukucacisa ukubaluleka ngisho nemininingwane ebonakalayo engabalulekile: lapho ikhule khona, yimuphi umbala, ngubani omunye owayeseduze. Kuye lokhu, ukwelashwa kokulala kuzophinde kuhluke. Nokho, ngokuvamile, utshani obuluhlaza luwuphawu lwethemba kanye nempilo enhle.
Ngakho-ke, uyini iphupho lotshani obuluhlaza, uma ucabanga ukuthi ulele kuso? Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukukhumbula ukuthi yikuphi isikhundla okwakunjalo:
Themba otshanini ngemuva - ohambweni olude.
Ukulala ngesisu - ukuphumula phakathi kwezindawo zakho zokuzalwa - amadolobha, amadolobhana.
Uma, ephusheni, umuntu olele elele nganoma yiluphi uhlangothi, kuzodingeka aphumule ekhaya.
Ephusheni kwakudingeka uwele embozweni ohlaza-empeleni, ungalindela ukuma noma ukukhwabanisa kumuntu othandekayo. Uma lowo olele ezama ukuvuka ebusweni, kodwa akazange aphumelele, uma kunjalo kufanelekile ukuqaphela ubuhlobo babangane nama-comrades. Futhi, kufanele uqaphele kakhulu emsebenzini, ngoba ungabambela abasebenzi.
Noma kunjalo, utshani obuluhlaza buyaphupha yini? Ukuze uphendule lo mbuzo, udinga ukucabangela izimila ngokwazo.
Uma utshani buphakeme, umuntu olele angasheshe anikwe umsebenzi omusha noma umsebenzi ongcono.
Uma utshani buphansi kakhulu, cishe cishe kuzodingeka uthathe imisebenzi nemithwalo yabanye abantu.
Kungani utshani obuluhlaza nezimbali buphupha? Kulokhu, sikhuluma ngobuhlobo bomuntu siqu abathandi. Izimbali ziqhekekile - ukuba zibe ngumshado. Uma nje bephuka imilenze yabo, mhlawumbe bahlukanise nabathandekayo bakho.
Utshani obuluhlaza ngombethe uphupha ngani? Lo mbono ukhombisa ukuthi maduzane ukugula okuhlupha umuntu olele noma izihlobo zakhe eziseduze zizophelelwa yisikhathi. Futhi, iphupho elinjalo lithi esikhathini esizayo esiseduze umuntu uzoba enempilo ngokuphelele.
Kuyathakazelisa, yini iphupho lohlaza obuluhlaza lapho lezi zilwane zikhona?
Inja enotshani - ukuhleba. Uma ekhuluma, khona-ke leli phupho likhulunywe ngakho futhi liba nomhawu. Inja igijimela utshani - ibe injabulo, ihlezi - ibe yintandokazi, amanga - ekufikeni komngane omdala.
Ikati otshanini - ezinkingeni zomsebenzi. Uma kunamakati amaningi, kusho ukuthi kuzoba nezingxabano nokuxabana nabalingani.
Uma imfuyo idla emanzini aluhlaza, umuntu olalayo uzothola umyalezo osithandayo. Uma utshani kulesi simo bukhanya, buhle, khona-ke ezindabeni zothando kuyoba nempumelelo, izitshalo ezomile zithembisa ukuhlukana noma ukuphikisana.
Izenzo eziphathelene nohlaza
Uma umuntu efuna into enotshani obuhlaza obuluhlaza ephusheni, kungcono ukuthi anganamatheli ezindlebeni zabanye abantu. Ngaphandle kwalokho, konke kungagcina kabi. Futhi, lokhu kulala kukhuthaza umuntu olele ukuba aqonde izindaba zakhe, ukuletha umyalo ekuphileni kwakhe.
Utshani, okuthandwa ngumuntu, lubonisa ukuthi empeleni udinga ukushintsha okuthile ekuphileni. Uma kungenjalo, ukucindezeleka ngeke kugwenywe.
Iyini iphupho lohlaza obuluhlaza? Ukuyichitha, ukuyichitha ngaphandle kokukhetha - ukuthi umuntu olele unesifiso nezidingo eziningi kangangokuthi kunzima kakhulu ukuzibhekana nazo. Ngakho-ke, kufanele uthukuthele izifiso zakho, ngaphandle kwalokho kube inkinga.
Kungani utshani obunokutshala okuluhlaza okwesibhakabhaka, kusasa? Umbono onjalo ubonisa ukuthi ufuna impilo enhle. Ngesikhathi esifanayo, kubalulekile ukuthi ubani ohlwanyela utshani. Uma yena ngokwakhe elele, khona-ke kuzodingeka wenze imizamo yalokhu. Uma omunye umuntu ewugubungula, ingcebo yezinto ezibonakalayo izogeleza ngenxa yokuhlanganiswa okuphumelelayo kwezimo.
Kungani utshani bunalo iphupho elihlaza? Hamba kuyo, hamba - kuya ekushintsheni okuhlukahlukene empilweni. Ngakho-ke, kubalulekile futhi ukukhumbula imininingwane:
Ukubona umkhondo ocacile wezinyathelo zakho kusho ukuthi kungekudala kuzoba nethuba lokuthuthukisa amakhono akho, ukuthuthukisa ibhizinisi lakho ozithandayo.
Lapho usotshani ungabona indlela ephikisiwe, imisebenzi eyinkimbinkimbi evela endleleni iyoxazulula ngokushesha futhi ngaphandle kwezinkinga nokudumazeka.
Uma umuntu olele elandela othandekayo otshanini, uthembisa ukuhlukanisa. Nokho, ngeke kube yisikhathi eside. Mhlawumbe othandekayo kuzodingeka ashiye isikhathi esithile, isibonelo, ohambweni lwebhizinisi.
Uma zikhona iziqhingi zotshani obumile noma obuhlaza, kufanele uqaphele impilo yakho. Kungase kube khona uhlobo oluthile lwesifo.
Umbono wezincwadi zasendulo zephupho
Mayelana nalokho utshani obuluhlaza obuphuphayo, ungatshela amaqoqo ahlukahlukene asendulo okuhunyushwa. Yilapho eyakuqoqa ulwazi oluthe xaxa mayelana nencazelo yamaphupho abakhulu-omkhulu-omkhulu abatholwa.
Ibhuku lephupho likaGypsy. Uma utshani bukhulu futhi buhle, khona-ke uzobe umshado. Uma kungavamile, umuntu olalayo ulinde izikhathi ezinzima.
Incwadi yesifazane yaseMpumalanga iphupho. Uma le ntombazane ibone ukukhanya okumnandi okwesibhakabhaka, ithembisa ukuthuthukiswa kwenhlalakahle. Izimila ezimileyo - ukugula komuntu olala naye noma izihlobo zakhe eziseduze.
Ibhuku lephupho lika-Esoteric. Uma utshani buhle, bude, bukhazimulayo, khona-ke umuntu olalayo ulindele isikhathi esiyimpumelelo, uma ophuzi, bese isifo. Ukwesaba yinsimbi ehlwanyelwe. Kulolu daba, umuntu ongelutho angaqamba amanga ngokufa.
Umphuphi weZadkiel (isiNgisi esidala). Uma umuntu ethanda utshani ephusheni, impumelelo yakhe imlindele yena nenhlalakahle yakhe iyathuthuka. Uma utshani bubi, buphuzi, kungase kusho ukuthi kunenkathi engalungile ezayo: izifo, izinkinga.
Ukuhumusha iphupho lamaMaya. Inani elihle: uma utshani luphupha, olalayo uzokwazi ukuphumula ngokushesha. Incazelo engalungile: udinga ukwesaba ukwenza iphutha empilweni yangempela. Kodwa-ke, ukuze kuvinjelwe lokhu ukuthi kungenzeki, amaMaya asendulo atusa ukuba badle uhlangothi olulodwa lwesitshalo izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokulala.
Incwadi yasendulo yephupho yaseFrance. Ngokwalo, utshani, ngokusho kwalokhu kuchazwa, luyisixwayiso. Sidinga ukwesaba abangane abacabangayo nabakwa-comrades abasanduliwe. Bangakwazi ukukhaphela, ukulimala. Ukudla utshani ephusheni kubumpofu nokulahlekelwa. Uma kuluphuzi, kusho ukuthi olalayo ulindele ukulahlekelwa nokudumazeka.
Incwadi yamaphupho yasendulo yaseShayina. Uma uphupha amaphupho ensimu enotshani obuluhlaza, ukuzuza, ukuchuma, ukuchuma kwempahla. Uma utshani bukhula endlini, ikamelo lizobe lingenalutho, abantu bazoshiya khona.
Ngokusho kwencwadi yaseRussia yasendulo iphupho, utshani, ephupha ephusheni, lubonisa izinkinga ezihlukahlukene nezithiyo ebhizinisini.
Incwadi yokuphumula yenyanga iveza impilo kubo bonke abaphupha ngotshani.
Iphupho lokuchaza impilo. Uma utshani buhlaza, buhle - ukubuyisela noma ukuqinisa ukuzivikela. Uma kuphuzi, kuqhumekile-kulesi sifo.
Ukuhunyushwa kwezincwadi zamaphupho zanamuhla
Sidinga ukucabangela ukuthi utshani buhlaza yini, ngokombono wezincwadi zanamuhla zephupho.
Ibhuku lephupho laseRussia. Uma utshani bephupha, umuntu uyazisola ngesidlule futhi anethemba lokuthi ikusasa elingcono.
I-Dream Dream Book yase-Ukraine. Ngokwencazelo yalo mthombo, utshani bufanekisela abantu, imvelo yomuntu olele. Kungcono izitshalo, zithandeka futhi zinobungane abantu abakuzungezile. Uma kukhona izindawo ezomile edolobheni, khona-ke phakathi kwabahlobo kukhona izifiso ezimbi. Uma leli phupho lalifanele lihlwanyele izimila, abantu bangalinda ibhizinisi elibi noma inkathazo enkulu.
Ibhuku elisha kakhulu lephupho lika-Ivanov. Utshani luhlobo oluthile lokusikisela. Ukulizwa, udinga ukwenza ukuzindla noma ukuzithuthukisa.
Umhambi wephupho. Ekhuluma ngokujwayelekile, utshani bufanekisela ithemba nethemba. Uma ihle, khona-ke umphuphi uyalindela inhlalakahle nokuphumelela, uma kunzima kakhulu. Ukuyihlafuna noma ukuyidiliza.
Ibhuku elisha lomphupho lomndeni. Uma utshani obunamanzi obuphuzile buphuze insimu, khona-ke empilweni yomuntu olalayo ulindele inhlalakahle nenhlanhla. Kubamabhizinisi bethembisa ukugcwalisa imali-mali, abaculi - inkazimulo, abathandi - imizwa emihle kanye nenjabulo komunye nomunye. Uma uphupha utshani obomile noma obomile, kudingeka uqaphele izifo.
Incwadi yesimanje yephupho. Ukuphuza utshani obuhle obuhlaza obumnyama buyathembisa umuntu ukuthi uphumelele futhi uphumelele. Uma une-shabby encane, udinga ukwesaba ukuma ezindabeni zezihlobo noma abangane. Uma izintaba ziphakama ngaphezu kohlaza, lokhu kuyisibonakaliso sengozi esondelayo.
Kunoma yikuphi, kufanelekile ukukhumbula ukuthi noma yikuphi iphupho akuyona into embi. Umbono ongeyena nje umxwayiso wokuthi empilweni yangempela kukhona okumele ukwesatshwe.
Ingabe Okunye Herrera ukhiye isidlali "Manchester United"?
Amacebiso awusizo ngoba nsuku zonke ekhaya, ezempilo